Rashford victime de maltraitance raciale, Ole - TELES RELAY
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ » Rashford victime de maltraitance raciale, Ole
MANCHESTER, Angleterre – Ole Gunnar Solskjaeradéclaré être “perdu pour des paroles” après qu'un deuxième joueur de Manchester Unitedaété victime d'abus racial sur les médias sociaux.
Marcus Rashford ခရစ္စတယ်မျက်နှာအဖွဲ့သည်မှာ 2-1 ရှုံးနိမ့်အတွက်ပင်နယ်တီပျောက်ဆုံးပြီးနောက်လူမျိုးရေးခွဲခြား tweets တစ်စီးရီးကိုလက်ခံရရှိ ကိုယ့်ငါးရက်အလားတူဖြစ်စဉ်များပြီးနောက်စနေနေ့တွင်မန်ယူအသင်းမှာ ။ ] ရှင်ပေါလု Pogba .
- ESPN Fantasy: ယခုမှတ်ပုံတင်မည်!
- မန်ယူ Pogba ရည်ရွယ်ပြီးလူမျိုးရေးခွဲခြားအကြမ်းဖက်မှုရှုတ်ချ
"ဒါဟာကျနော်တို့ကတနင်္ဂနွေမတိုင်မီနှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောနဲ့အတူတူပါပဲင်; ရပ်တန့်ရပါမယ် "ဟု Solskjaer သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ပြောသည်။ "ကိုယ့်စကားကိုဆုံးရှုံးတယ်။ သူတို့ကနောက်ကွယ်ကမှားယွင်းသောသက်သေခံကဒ်ပြားဖုံးကွယ်ဖို့ဆက်အဲဒါကိုအကြောင်းကို 2019 စကားပြောအရူးပါပဲ။ "
Rashford ပြီးနောက်ဒုတိယနှစ်ဝက်အတွက်ရည်မှန်းချက်လွဲချော် ယော်ဒန်မြစ် Ayew ပြီးနောက်တံဆိပ်ကပ်နေသည်။ 32 မိနစ် 15 နှစ်များတွင်မန်ယူအသင်းမှာနန်းတော်ရဲ့ပထမဦးဆုံးရည်မှန်းချက်သွင်းယူ။
ဒံယလေကဂျိမ်း နောက်ဆုံးမှာမှသာအဘို့, အချိန်ကနေနှစ်မိနစ်ညီမျှ ပက်ထရစ်ဗန် Aanholt ရိုက်နှက်ပြီးနောက်သုံးမိနစ်လောက်ဒဏ်ရာထဲသို့အနိုင်ရရည်မှန်းချက်ဂိုးသွင်းရန် ဒါဝိဒ်သည် De Gea မိမိအိမ်နီးချင်းကိုဘူတာရုံ
"ကျနော်တို့အလုံအလောက်အရေးပေါ်နှင့်ထိုးဖောက်မှုရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပါထင်ပါတယ်" Solskjaer ကဆိုသည်။ "[ပထမရည်မှန်းချက်] တစ်ဦးရည်မှန်းချက်ဒါလွယ်ကူပါတယ်, ရှည်ကန်ခဲ့, နှင့်နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်, ဒါဝိဒ်သည် [အားလုံးဂိမ်း] ဘောလုံးကိုထိမပြုခဲ့ကြပြီးနောက်တဖန်ဂိုးသွင်း။ တခါတရံသူကဖြစ်လိမ့်မည် - အသင်းများကဒီမှာ လာ. ငါတို့ကိုဆန့်ကျင်ခုခံကာကှယျပါလိမ့်မယ်။ "
Solskjaer သူလည်းစစ်ကြောတော်မူဒိုင်လူကြီးရှင်ပေါလု Tierney ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမကျေနပ်သောကြောင့်ဟုဆိုသည် ဂယ်ရီ Cahill သာဖယ်ရှားပြီးနောက်ပထမဦးဆုံးကာလအတွက်အဝါကဒ် အန်သိုနီစစ်အုပ်ချုပ်ရေး အခါပြင်သစ်
နော်ဝေလည်းစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအတွက် fouled ခံရဖို့သည်ထင်ရှားလာသောအခါသူ့အဖွဲ့တစ်ပြစ်ဒဏ်ခဲ့ကြသင့်ကြောင်းခံစားခဲ့ရ မာတင်ကယ်လီ ကဿဟာယပျက်မခံခဲ့ရသည့်ဆုံးဖြတ်ချက် - ထိုဒေသတွင်
"ကျနော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့သိသာပြစ်ဒဏ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူကံခဲ့ကြသည်ထင်ပါတယ်" Solskjaer ကဆိုသည်။ "ဒါဟာတစ်ဦးကိုပစ်ခတ်င်နှင့်ဒိုင်လူကြီးဂိမ်းကိုမြင်သောအခါရိုက်သူတန်းတူမှတက်မဖြစ်သိထားသညျ။ ဤသည်ရည်မှန်းချက်အပေါ်တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်ဖြစ်ပါသည်, ပြန်အလယ်ဗဟိုမှချော်ပါလျှင်မထားဘူး။ " ယူနိုက်တက်ပထမဦးဆုံးကာလ၌, Luke Shaw ဆုံးရှုံးခဲ့ရပေမယ့် Solskjaer ကြောင့်ခရီးသွားလာမတိုင်မီလေးနက်မဟုတ်ပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ် ဆောက်သမ်တန်, Shaw ၏ယခင်ကလပ်အတွက်လာမယ့်စနေနေ့။
"ကျနော်တို့ကမနက်ဖြန် Scan ဖတ်ပြုကြလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူကသူ့တံကောက်ကြောဒဏ်ရာတစ်ခုခုခံစားရတယ်" Solskjaer ကဆိုသည်။ "မျှော်လင့်ဒါလေးနက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေနဲ့ကျွန်မသူဆောက်သမ်တန်မှပြန်လာလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ "
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/marcus-rashford/story/3927652/rashford-racially-abusedole-lost-for-words